ठमेलबाट लागुऔषध सहित २ जना पक्राउ - TV Annapurna
काठमाडौँ महानगरपालिका २६ ठमेलबाट लागूओषध सहित २ जना पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ठमेलमा लागु औषध कारोबार भईरहेको भन्ने बिशेष सूचनाको आधारमा त्यस क्षेत्रमा छापा हानेको थियो ।
पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक, घुम्ताङ्ग गाउँपालिका वडा नं. ७ घर भई हाल काठमाण्डौ, जोरपाटी बस्ने वर्ष २३ को राम बहादुर मगर र जिल्ला दाङ, घोराही नगरपालीका ४ घर भई हाल काठमाण्डौ नक्साल बस्ने वर्ष २६ को सागर शर्मा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनिहरुको साथबाट निषेधित लागु औषध PHENERGAN थान – ५५, DIAZELAB थान – ५५, NOOPHIN थान – ५५, अमेरिकन डलर 10, मलेसियन रिङ्गेंट – ५, र नेपाली रु. १,२२०/- बरामद गरिएकाे छ ।
उनिहरूलाइ आबश्यक कारवाहिको लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरमा राखिएको छ । घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान भईरहेको प्रहरीले जनाएकाे छ ।